” ကိုယ်ကအငိုက် သူက အ၀ိုက် ” ( စ/ဆုံး) – Grab Love Story
ဇာတ်လမ်း – ချမ်းမြေ့သာဇံ မောင်မောင်နှံ
အ၀တ်လဲရန် အကျီင်္လေးကိုချွတ်၍ ထမီကို ရင်လျှားလိုက်သည်။ပြီးတော့ တန်းတွင် အကျီချိတ်ဖြင့်ချိတ်ထားသော အကျီတစ်ထည်ဆီသို့ သူမ၏လက်ကို လှမ်းလိုက်သည်။`
လှမ်းလက်စ လက်ကို ချက်ခြင်းရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့သို့ နားစွင့်လိုက်သည်။
“ ဒါ ဒါ နေဇာကျော် ပဲ ”
အိနြေ္ဒမရ ထမီရင်လျှားဖြင့်ပင် အိမ်ရှေ့သို့ ပြေးထွက်ခဲ့သည်။ဟုတ်ပါသည်။ တီဗီဖန်သားပြင်တွင်
အဆိုတော် နေဇာကျော်က တေးတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုဖျော်ဖြေနေသည်။အိမ်ရှေ့တွင် ဘယ်သူမှမရှိ့။
အမေ နှင့် အဒေါ်တို့က မီးဖိုထဲတွင် ညစာအတွက် အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။မွန်မွန်ရည် ကုလားထိုင်တွင်
တောင် ၀င်၍ မထိုင်ဖြစ်။တီဗီပေါ်မှ နေဇာကျော် ပုံရိပ်ကို မတ်တပ်ကြီး အငမ်းမရ ကြည့်နေပါသည်။
“ ဟဲ့ .. ဟဲ့ .. အဲ့ဒါ အိမ်ရှေ့အိမ်က ပြောင်းသွားတဲ့ ကောင်လေးမဟုတ်လား ”
“ ဟင် .. အင်း .. ”
ဗြုံးကနဲ နောက်ဖက် မှ ပေါ်ထွက်လာသော ဒေါ်လေး၏ အသံကြောင့် မွန်မွန်ရည် ရုတ်တရက် လန့်သလို
ဖြစ်သွားသည်။ပြီးတော့ တဆက်တည်း သူမအဖြစ်ကို သူမ တွေးမိပြီး ရှက်သွားကာ မျက်နှာလေး ရဲသွားသည်။
“ သူများတွေပြောလို့ ဟုတ်မဟုတ် ထွက်ကြည့်တာ ”
သီချင်းလည်းဆုံးသွားပြီ အရှက်ပြေစကားကိုပြောရင်း မွန်မွန်ရည် အိမ်ထဲဖက်သို့ ပြန်ဝင်လာခဲ့သည်။
အိမ်ထဲဝင်သွားသော မွန်မွန်ရည်၏ နောက်ကျောကိုကြည့်ရင်း ဒေါ်လေးကပြုံးသည်။ဒေါ်လေး၏ အပြုံးတွင် ငါလည်း ငယ်ရာက ကြီးလာတာပါဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် က ပေါ်လွင်နေသည်။ မွန်မွန်ရည် အခန်းထဲရောက်တော့
ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ့ အိပ်ယာပေါ်သို့ ထိုင်ချလိုက်သည်။
“ နေဇာကျော် ”
အခု လပိုင်းအတွင်း တဟုန်ထိုးနာမည်ကြီးလာသည့် အဆိုတော် .. သူ့နာမည်ရင်း .. ကျော်ကျော် အထက်တန်းကျောင်းတွင် မွန်မွန်ရည်နှင့် တစ်တန်းတည်းနေခဲ့သော သူငယ်ချင်း။ပြီးတော့ မွန်မွန်ရည်တို့ အိမ်ရှေ့အိမ်က သူတို့အိမ်။ မနှစ်ကမှ ရောင်းပြီး ကျောက်ကုန်း သို့ ပြောင်းသွားတာဖြစ်သည်။
“ ငါ ခုမှ သူ့ကို ဘယ်လို ဖြစ်နေရတာလဲ ”
သူမ ကိုယ် သူမ ပြန်မေးမိသည်။ ၁၀ တန်းတုန်းက သူမကို ကျော်ကျော် က ရည်းစားစကား ပြောဖူးသည်။
လေးငါးကြိမ်ထက်မနည်း စာလည်း ပေးဖူးသည်။သည်တုန်းက သူ့ကို ဘာလို့ မွန်မွန်ရည် ပြန်မချစ်မိ
“ ငါ ဒါတွေ စိတ်မ၀င်စားဘူး ကျော်ကျော် ရာ ” ဟုသာ တွင်တွင်ကြီး ပြော၍ မွန်မွန်ရည် ငြင်းခဲ့သည်။
ကျောင်းသားဘ၀ ကျော်ကျော်၏ ပုံစံက ဒေါင့်မကျိုးလို့လား … ဒါလည်းပါသည်။အဓိက ကတော့ သူမ၏ မိသားစု အခြေအနေဖြစ်သည်။မွန်မွန်ရည်တွင် ဖခင် မရှိ့တော့ပဲ အမေ နှင့် အဒေါ် မုဆိုးမတို့က
ဈေးထဲတွင် ကွမ်း ကွမ်းသီးဆိုင်ဖွင်၍ မိသားစု စားဝတ်နေရေးတာဝန်ကို မနိုင်မနင်း ထမ်းနေရသည်။ မွန်မွန်ရည်တွင် မောင်လေး နှစ်ယောက်ကလည်း မူလတန်းအရွယ် ရှိ့သေးသည်။
သူမ ၁၀ တန်း အောင်မှဖြစ်မည်။ ပြီး ဘွဲ့တစ်ခု ရအောင်ယူ၍ မိသားစုတာဝန်ကို တတ်အားသမျှ ယူရမည်။အခု မွန်မွန်ရည် ဘွဲ့လည်း ရပြီးပြီ။အလုပ်လည်း ရပြီ။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် အလုပ်ကို ဘွဲ့ကြောင့်
ရခဲ့တာ မဟုတ်။သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် အလှအပကြောင့် ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရတာမှ နေရာကောင်းကိုပင် ၀င်၍ ထိုင်လိုက်ရသည်။ ခု အလုပ်ဝင်တာ ၆ လ ပဲ ရှိ့သေးသည်။ သူမတို့၏ နံရံတွေ အမိုးတွေ ပေါက်ပြဲနေသော အိမ်လေးက ပျဉ်ထောင်အိမ် အသစ်လေးပင် ဖြစ်နေပြီ။ မွန်မွန်ရည် ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရမလား မသိ အလုပ်ရရန် ကြိုးစားရင်း ကုမ္ပဏီ၏ အရေးပါအရာရောက်ဆုံး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ၏ ယောက်ဖနှင့် ဆက်သွယ် ချဉ်းကပ်မိခဲ့သည်။ သေချာပြီဆိုတော့လည်း မွန်မွန်ရည် ဇွတ်၍ ရင်းခဲ့သည်။ ဒါတွေထားပါတော့လေ ….
“ နေဇာကျော် ” သူ့ကိုများ ငါအခုမှ ချစ်နေမိပြီလား .. ဒါက ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ရင်းနှီးချင်တာလား မသိ။ ခုချိန်မှာ သူကရော ငါ့ကို ချစ်နိုင်ပါ့ဦးမလား။ ဒါက သိပ်မသေချာ။ မဖြစ်နိုင်ဖို့က များသည်။ သက်ပြင်းတွေ အကြိမ်ကြိမ်ချရင်း စောစောက ၀တ်မည်ကြံခဲ့သော အကျီလေးကို လက်လှမ်း၍ ယူကာဝတ်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက် အိမ်ရှေ့သို့ ကားတစ်စီး ထိုးရပ်သံ ကြားလိုက်ရသည်။
“ ဒါ အစ်ကိုကြီး ရဲ့ ကားပဲ .. ” ဟု ရေရွတ်ရင်း မွန်မွန်ရည် အိမ်ရှေ့သို့ ပြေးထွက်ခဲ့လေသည်။မိန်းခလေးတစ်ယောက် ရှိ့လှမှ အသက် ၁၉ – ၂၀ လောက်သာ ရှိ့ဦးမည်။ ၀ါရွှေသောအသားနှင့် လမ်းလျှောက်ပုံက ဆင်မယဉ်သာ အိနြေ္ဒရရ ရှိ့လှသည်။ ကိုယ်လုံးအလှကတော့ ရှားမှရှား ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး။ တတုံတုံဖြစ်နေတဲ့ တင်သားဆိုင်ကြီးတွေက ခါးသေးသေးအောက်တွင် ၀ိုင်းစက် ကားအယ်နေသည်။ ရင်သားအစုံကလည်း တင်သားကြီးတွေနှင့် လိုက်ဖက်တဲ့ အရွယ်အစား။ ခြေလှမ်းလိုက်တိုင်း ထမီအကွဲ
ကြောင်းမှ လှစ်ကနဲ ၀င်းဝင်းသွားတဲ့ ခြေသလုံးသားလေးတွေက မြင်ရသူတွေကို မျက်စပြစ်ပြသလို
“ ကျော်ကျော် မင်းဘာကြည့်နေတာလဲ .. ”
“ ဟိုမှာလေ .. ”
နေဇာကျော်၏ ရှေ့တွင်ထိုင်နေသော မျိုးထွန်းကြည် က လမ်းမပေါ်သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
“ အား .. ငါသိတယ် .. ”
“ မင်း ဘာသိတာလဲ မျိုးကြည် .. ”
“ မင်းကရော သူ့ကို သိလို့လား .. ”
“ ဟ ငါတို့ စမ်းချောင်းမှာနေတုန်း က အိမ်ရှေ့အိမ်ကလေ .. ငါနဲ့ ကျောင်းနေဖက် မွန်မွန်ရည်တဲ့ .. ”
“ အား .. ဟား .. သိလှချည်လား .. ”
“ ပြော .. မင်းကရော ဘာသိတာလဲ .. ” ပြောပြီး နေဇာကျော် က စားသောက်ဆိုင် တံခါးပေါက်မှ နေ၍ လမ်းမပေါ်သို့ လှည့်ကြည့်နေပြန်သည်။ ကုမ္ပဏီ ၀တ်စုံဖြင့် မွန်မွန်ရည်က တော်တော်လေးပင် ဝေး၍ သွားပေပြီ။
“ ဒီလိုကွ .. ဒီကောင်မလေးက သူ့ဘဲကြီး နဲ့ ငါ့တည်းခိုခန်းကို လာဖူးတယ် .. ”
“ ဘာ.. မင်းလူမှားတာ နေမှာပါ .. ဒီကောင်မလေး က တော်တော် အေးတာကွ .. ”
“ အား ဟား .. မင်းကြိုက်နေပြီနဲ့ တူတယ် . . ငါ လူမမှားဘူးကွ .. တည်းခိုခန်းကို လာတာမှ တစ်ခါတည်း မဟုတ်ဘူး .. ငါကောင်းကောင်း မှတ်မိတယ်.. ဒီဝတ်စုံ နဲ့ ပဲ .. သူ့ဘဲကြီးကလည်း သူတို့ ကုမ္ပဏီ က လူကြီးပိုင်းထဲကပဲနဲ့ တူတယ်ကွ .. ”
“ မျိုးကြည်ရာ ဟုတ်မှလည်း လုပ်ပါကွာ .. ”
“ ကျော်ကျော် မင်းကြည့်ရတာ ဒီကောင်မလေးကို သဘောကျနေပုံပဲ .. ငါမပြောရင် သူငယ်ချင်း မပီသဘူး
ဖြစ်မယ် .. နောက်မှ မင်းက ငါ့ကို မပြောရကောင်းလားလို့ အပြစ်တင်နေဦးမယ် .. ”
“ မင်းက ဘာပြောစရာ ကျန်သေးလို့လည်း .. ”
“ သူတို့ အတွဲကို ငါချောင်းခဲ့ရတာ ပြောမလို့ .. ”
“ ကဲ ပြောမှာဖြင့် ပြောကွာ ..တစ်နေ့ . အဲ .. သူတို့ ပထမဆုံးလာတဲ့ အခေါက်တုန်းက .. သူတို့လည်း အခန်းထဲ ၀င်သွားရော .. ငါက လိုက်ချောင်းမလို့ လုပ်နေတုန်း နယ်က ဧည့်သည်တွေ တစ်ပြုံကြီး တည်းခိုမလို့ ရောက်လာတော့ ငါလည်း အလုပ်များသွားပြီး အတော် ကြာမှ သူတို့ဝင်သွားတဲ့ အခန်းဘေးက အခန်းကနေ ချောင်းတာပေါ့ ငါ့တည်းခိုခန်းမှာ ငါ့ဖါသာ အထာတွေ လုပ်ထားတာ ရှိတယ် .. ”
“ မင်းချောင်းတော့ ဘာတွေ့လည်း .. ”
“ ငါလည်း ချောင်းရော .. ”
“ မွန် နောက်တစ်ခါ လုပ်ရအောင်နော် .. ”
“ သိဘူး .. အကိုကြီး သဘောပဲ .. ”
ဒီတော့ အကိုကြီး ဆိုသူက မွန့် ခန္ဓာကိုယ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးကို ကုတင်စောင်းသို့ ကန့်လန့်ဖြတ် အိပ်စေ
ပါသည် ။ ဒီတော့ မွန်၏ တင်းမာကားအယ်နေသော တင်ပါးဆုံကြီးမှာ ကုတင်စွန်းတွင် တင်ထားလေတော့ ပိုပြီး မက်မောစရာပါ။ ပြီး ခြေတွဲလောင်းချထားလေတော့ ဗဟိုချက်မှ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ ပိုမိုစူအိ
ဖေါင်းနေပါသည် ။ အမွှေးလေးတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ပေါက်နေသော စောက်ပတ်ကြီးကစိမ်ခေါ်နေသယောင်ယောင် ။
“ မွန်က သိပ်လှတာပဲကွာ သိလား .. တကယ်လှတယ် .. ” အကိုကြီးဆိုသူက မက်မောစွာပြောသည်။ ဟုတ်ပါသည် ။ မွန်မွန်ရည် အသက် ၂၀ မပြည့်သေးပါ။ သို့သော် တင်ပါးဆုံကြီးတွေ ကားအယ်နေပုံ နို့ကြီးတွေ အယ်ထွားနေပုံက မက်မောလောက်၏ ။ ခုလည်းကုတင်စောင်းမှာပက်လက်လှန် ခြေတွဲလောင်း
ဆိုတော့ ဖွံဖြိုးလှသော မွန်မွန်ရည်၏အလှမှာရှုမငြီးပေ။ ပေါင်သွယ်သွယ်ကြီးတွေက စင်းနေသလို ပေါင်နှစ်
ချောင်းကြားက အမွှေးလေးတွေနှင့် စောက်ပတ်ကြီးကလည်း စူမို့မို့ ။ အကိုကြီးက မွန့် ပေါင်ကြားမှာ ရပ်လိုက်ပြန်တော့ ပေါင်ကိုထပ်ပြီး ကားပေးလိုက်ရပြန်သည် ။ ထို့ကြောင့် စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်း ပိုကွဲ
သွားတော့ နီရဲသော အတွင်းသားမှာ စိုရွှမ်းနေပါသည် ။ အကိုကြီးက စောက်ပတ်အုံကို ဖိညှစ်ကိုင်ရင်း
စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည် ။
“ အကိုကြီးရယ် မွန်မနေတတ်တော့ဘူး သိလား .. ”
နှုတ်ခမ်းလေးစူကာ မူလိုက်ပြန်တော့ အကိုကြီးရင်ထဲမှာ ဖျင်းကနဲ ဖြစ်သွားရသည် ။ အကိုကြီး ဆိုသူက လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မွန်မွန်ရည်၏ နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း လီးကြီးထပ်ဖြင့် စောက်ပတ်ထိပ်က
စောက်စေ့နီရဲရဲလေးကို မထိတထိ နှင့် ဖိဖိ ထိုးပေးနေတော့ တကိုယ်လုံးရမက်ခိုး ဝေနေသော မွန်မွန်ရည်မှာ ဖင်ကြီးတွေ တုန်ခါလာသလို ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်လာသည်။“ အကိုကြီးရယ် မွန်ကို ဒီလိုပဲ လုပ်နေတော့မှာလားရှင် .. ”
ခပ်ညုညုလေး ပြောလိုက်တော့ အကိုကြီးက ပြုံးပြီးကြည့်သည်။ ထပ်တွင် အရည်တွေ စုနေသော လီးကြီးကို သေသေချာချာကိုင်ပြီး မွန့်စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့လိုက်သည်။ အစ်ကိုကြီး လက်က စောက်ပတ်ဝ ကိုပါ ဖြဲလိုက်ပြန်သည်။
ပြီးတော့ နီနီရဲရဲ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးကြီးက ဆတ်ခနဲ တိုးဝင်သွားသည်။ စီးစီးကြပ်ကြပ် တိုးဝင်သွားသဖြင့် မွန်ရော အစ်ကိုကြီးပါ အရသာထူးကို ခံစားရသည် ။
မွန်မွန် မှာ အပျိုဖြစ်ပြီး ပေါင်ကားပေးထားပေမယ့် စောက်ခေါင်းမှာ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်လေရာ လီးတုတ်တုတ်ကြီး၏ အထိအတွေ့က ထူးခြားလှသည်။
ထို့ကြောင့် ကုတင်အောက်မှာ ရပ်နေသော အစ်ကိုကြီး၏ ခါးကို လက်ကလေးဖြင့် လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ လီးကြီးက အလိုက်သိစွာ တစ်ထစ်ခြင်း ထိုးသွင်းသွားရာ အဆုံးထိလည်း ၀င်သွားရော ၇ပ်ထားလိုက်သည်။
“မွန် လီးဝင်တာ နာသလား .. ဒီနည်းက လီးတစ်ဆုံးဝင်တယ် … ဆောင့်ရင် သိပ်နာတတ်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား ”
မွန်မွန်ရည်က ဘာမှမပြော လုပ်သာလုပ်ပါဆိုသည့်သဘောဖြင့် ကြည့်နေလေရာ အစ်ကိုကြီးက လီးကို တစ်ဆုံးနီးပါး ပြန်ထုတ်ရင်း ဗြစ်ကနဲ ပြန်ဆောင့်သွင်းလိုက်သည် ။
“ အင့် အကိုကြီးရယ် နာတယ်ကွာ .. ”
“ ဟင် ဒါဖြင့် ဖြစ်ပါ့မလား သိပ်နာသလား .. ”
“ ဟင့်အင်း လုပ်သာလုပ် ကိစ္စမရှိ့ဘူး .. ”
ထို့ကြောင့် အစ်ကိုကြီးက ဆက်တိုက် ဖိဆောင့်၍ လိုးလေတော့သည်။ ရှောကနဲ ရှောကနဲ လီးဝင်မြန်လာသည်နှင့်အမျှ ဖွတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ အသံများထွက်လာသည်။
“ ကောင်းရဲ့လား မွန် ထိရဲ့လား ကဲ ကဲ .. ”
အကိုကြီး က မွန့်ကိုယ်ပေါ်ကိုင်းရင်း မွေ့ယာပေါ် နွဲ့နွဲ့လေးတင်ထားသော မွန်၏ ခါးလေးကို ကြွကနဲ ဆွဲမကာ ခပ်ပြင်းပြင်း ဖိဆောင့်ပါတော့သည်။ မွန်မွန်ည်ကလည်း အငမ်းမရဟန်ဖြင့် အကိုကြီးလည်ပင်း ကို သိုင်းဖက်လိုက်သည် ။
“ ဟင်း ဟင်း .. အကိုကြီးရယ် အရမ်းထိတာပဲ .. ”
မွန်မွန်ရည်ခမျာ အရသာ ဆိမ့်နေပြီမို့ ဖင်ကြီးတွေ မြောက်ကြွလာပါတော့သည်။ေထြောက်တွေ တွဲလောင်းချထားရသည်ကိုလည်း အာရဟန် မတူတော့ပါ ။ ရပ်နေသော အကိုကြီး၏ ခါးပေါ်သို့ ပေါင်တန်ကြီးများ တင်လိုက်ကာ လိမ်ညှပ်ထားလိုက်သည်။
“ မွန့် ပေါင်တွေကို ထိမ်းထား အကိုကြီး ဆောင့်တာ ခက်သွားမယ် .. ”
ပြောရင်းဆောင့်အားနည်းသွားသဖြင့် မွန်လည်း ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြုတ်လိုက်ရသည် ။ ကုတင်စောင်းသို့ တွဲလောင်းပြန်မချတော့ပဲ ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို ဒူးကွေးကာ လေထဲသို့ မြှောက်တင်ထားလိုက်သည် ။ အကိုကြီးကတော့ စောက်ခေါင်းထဲ ပြည့်ညှပ်နေသော လီးကြီးကို အင်တိုက်အားတိုက် လိုးညှောင့်နေတော့သည်။
“ အကိုကြီးရယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ အား အား အမလေး အကိုကြီးရယ် .. ”
တဟင်းဟင်း မာန်တက်လာသော မွန်မွန်ရည်၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ လူးလွန့်ကော့ပြန်လျှက် ငါဖယ်လူးသလို ဖြစ်နေတော့သည် ။
“ အကိုကြီး မရပ်နဲ့ ကွဲချင်ကွဲပါစေ ဆောင့်ဆောင့် .. ” ဟု အားမလိုအားမရ မြည်တမ်းတိုင်း အကိုကြီးကလည်း တစ်ချက်မှာ မညှာပါလေ။ သံချောင်းသဖွယ် မာတောင်နေသော လီးကြီးမှာ စောက်ပါတ်တစ်ခုလုံ ချိုင့်ဝင်သွားအောင်ပင် မနားတမ်း ဆောင့်နေလေတော့သည် ။
တဖြည်းဖြည်း တတ်ကျွမ်းလာလေပြီဖြစ်သော မွန်မွန်ရည် ကလည်း ပေါင်တန်ကြီးကို အသုံးပြုကာ စောက်ပတ်ထဲ ၀င်ဝင်လာသော လီးတန်ကြီးကို အားရှိ့သလောက် ဖိညှစ်ပေးရင်း ကော့ကော့တတ်လာချေပြီ။ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးတန်ကြီး တိုးဝင်လာတိုင်း တတ်နိုင်သလောက် ညှစ်အားပေးရင်း ကော့ကော့ပေးနေရတာ အရသာ ကောင်းလှပေ၏ ။
“ မွန် အကိုကြီး ပြီးချင်လာပြီကွာ .. ”
ယောင်္ကျားသားဖြစ်သော်လည်း ဆိမ့်အီသော အရသာ အထွဋ်အထိပ်ကို ရလုနီးပြီးဖြစ်တာကြောင့် စကားပင်မပီတော့သလို ဆောင့်ချက်တွေ လျော့လာပါ၏ ။ လီးထိပ်ကြီး တစ်ခုလုံးလည်း ဆိမ့်ကျင်နေပြီ ။
“ အို အကိုကြီးရယ် ရပ်တော့မလို့လား မွန် တစ်မျိုး ဖြစ်လာပြီကွယ် .. ”
မွန်မွန်ရည် ပြီးချင်နေပြီကို နားလည်သော အကိုကြီးကလည်း ရှိ့သမျှ အားသွန်ကာ မနားတမ်း ထိုးဆောင့်တော့သည် ။ ပေါင်တန်ကြီးတွေအား အကိုကြီး ပခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ တင်လိုက်ပြီး တင်ပဆုံကြီးတွေမှာ မွေ့ယာမှ လွတ်ထွက်နေသည့်အပြင် စောက်ပတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး အပေါ်သို့ ဖွင့်ပေးနေရကာ မွန်မွန်ရည်မှာ ဆိမ့်ဆိမ့်အီအောင် ကောင်းနေသည် ။
“ ကဲ မွန်ရော အကိုကြီးရော တစ်ပြိုင်တည်း ပြီးကြရအောင် ကဲ .. ကဲ .. ”
“ ဗြစ် .. ဖွတ် … ပလွတ် …. ဖွတ် .. အားးး .. အင်း … ဟင်းးး .. ဟင်းး အရမ်းကောင်းတာပဲ အကိုကြီးယ် .. အား … အားး .. ”
ဖင်ကြီးတွေ မွေ့ယာနှင့်လွတ်ပြီး စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး လန်တက်ပွင့်အာနေသဖြင့် လီးတန် တစ်ဆုံးထိ ဖိဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျင်တက်ကာ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ ကော့ထိုးကာခံရင်း မွန်မွန်ရည်မှာ ကာမအရသာထူးကို ဆွတ်ခူးလိုက်ပါသည် ။
တဟင်းဟင်း တကျွတ်ကျွတ် မြည်တမ်းရင်း မွန်မွန်ရည်မှာ ပြီးဆုံးသွားရသလို အကိုကြီး၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်မှလည်း အရည်များ ပန်းထွက်လာတော့သည် ။
“ အဲ့ဒါပဲ ကျော်ကျော် .. ”
“ အင်းးး .. ”
ကြားရယုံနဲ့တင် နေဇာကျော် လီးက မာန်ထနေချေပြီ ။ မွန်မွန်ရည် ခံတဲ့အကြောင်း ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကြားလိုက်ရတော့ နေဇာကျော်သည် မွန်မွန်ရည်ကို အရင်က ထက်ပင် တမ်းတမိနေတော့သည် ။